မဒေါင်းလုပ် Home Design APK မအဘို့ Android
မဒေါင်းလုပ် Home Design
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Android (143.00 MB)
မဒေါင်းလုပ် Home Design,
Home Design Makeover APK သည် match-3 အခြေခံ အိမ်ဒီဇိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အိမ်ဒီဇိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ အိမ်ဒီဇိုင်းဂိမ်းများနှင့် match-3 ဂိမ်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဤပျော်စရာဂိမ်းကို သင်နှစ်သက်မည်ဖြစ်သည်။ Home Design ကို APK အဖြစ် သို့မဟုတ် Google Play မှ Android ဖုန်းများတွင် အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Home Design APK ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Home Design Makeover မှကြိုဆိုပါတယ်။ ကံကောင်းသောမိသားစုများကို အံ့သြဖွယ်အိမ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏အိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်လာပါ။ သင့်အိမ်မက်ကို လှပသောအလှဆင်မှုများဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကာ ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်မက်များကို အလှဆင်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ match-3 ပဟေဋ္ဌိများကို ဖြေရှင်းပါ။ အိမ်၏အသွင်အပြင်ကို လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဝင်လာသောဖောက်သည်များကို အံ့အားသင့်စေပါသည်။
Home Design APK နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း အင်္ဂါရပ်များ
လယ်ယာအိမ်ပုံစံ သို့မဟုတ် ခေတ်မီပုံစံဖြင့် အိမ်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်မလား။ သင်ဆုံးဖြတ်၊ သင်ဒီဇိုင်း။
မိသားစုနှင့် အဆင်ပြေသော ဧည့်ခန်းများ၊ ကျေးလက်မီးဖိုချောင်များ၊ စတိုင်ကျသော ရေချိုးခန်းများနှင့် အိပ်ခန်းများ အပါအဝင် မတူညီသော အခန်းပုံစံများကို ဒီဇိုင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံပါ။
ကြင်စဦးစမှသည် ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်များအထိ ဖောက်သည်အမျိုးမျိုးကို ၎င်းတို့၏နေအိမ်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန် ကူညီပေးပါ။ တိုကျို၊ ပဲရစ်၊ မော်ရိုကို၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား။
အရည်အသွေးမြင့် ဒီဇိုင်နာ ပရိဘောဂများ၊ မီးချောင်းများ၊ အခင်းများနှင့် အခြားသော အလှဆင်ပစ္စည်းများဖြင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် များပြားလှပါသည်။
အော့ဖ်လိုင်းမုဒ်ဖြင့် စွဲလမ်းစေသော ဂိမ်းကစားခြင်းကို ခံစားလိုက်ပါ။
အဆုံးမရှိသော အပန်းဖြေပျော်ရွင်မှုအတွက် match-3 ပဟေဠိ 1000 နှင့် ဂိမ်းမုဒ်များစွာကို စိန်ခေါ်ပါ။
အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း ဒီဇိုင်းအသစ်များ၊ ကြမ်းပြင်အစီအစဉ်များ၊ ပြင်ပဥယျာဉ်များ၊ ရှုခင်းများ၊ ရာသီအလိုက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားအရာများပါရှိသော အခမဲ့အကြောင်းအရာအသစ်များကို မကြာခဏ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
ခေတ်မမီတော့သော အိမ်များကို ခမ်းနားသော နေရာများအဖြစ် ပြောင်းလဲ၍ ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ မိုဘိုင်းတွင် လူသုံးအများဆုံး အိမ်ဒီဇိုင်းဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Home Design ကို ယခုပဲ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Home Design မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 143.00 MB
တီထွင်သူ: Storm8 Studios LLC
Bus Simulator: Ultimate သည်သင် Android ဖုန်းတွင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ကစားနိုင်သည့်ဘတ်စ်ကား...
Farming Simulator 18 သည်သင်၏ Android ဖုန်းတွင်ကစားနိုင်သောအကောင်းဆုံးလယ်ယာ simulator ဖြစ်သည်။ ...
Truck Simulator 2018: ဥရောပ၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု၊ တူရကီ၊ Android တစ်ခုတည်းမဟုတ်၊...
Farming Simulator 20 သည် APK နှင့်အတူအလိုအပ်ဆုံး Android ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Farming Simulator 20...
Trash Truck Simulator သည် Android operating system...
Minibus Simulator 2017...
Taxi Simulator 2018 သည်သင်၏ Android ဖုန်းတွင်အခမဲ့ download...
Bus Simulator 3D နှင့်အစစ်အမှန်မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါ၊ ၎င်းကို...
Construction Simulator2သည် diggers နှင့် dozers...
Ultimate Car Driving Simulator သည် Android...
သာမန်စစ်ပွဲဂိမ်းများထက်ကွဲပြားစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Tactical Battle Simulator သည်ထူးခြားသော...
Farmville3သည် Android operating system ဖြင့်သင်၏ smart devices...
Car Parking Multiplayer သည် Google Play...
ဘရာဇီး၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်မော်ဒယ်များအပါအ ၀ င်ပါဝါများနှင့်ကွဲပြားသောဂီယာများဖြင့်ယာဉ်များသို့ခုန်။...
AG Subway Simulator Pro သည်မိုဘိုင်းကစားသူများအတွက် Google Play တွင်အခမဲ့ရနိုင်သော simulation game...
Europe Truck Simulator သည်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းကစားသမားများအတွက် Serkis ကတီထွင်ပြီးထုတ်ဝေသော...
Dungeon Simulator သည် Android operating system...
မိုဘိုင်းခြင်း simulation ဂိမ်းများတွင်ပါရှိသော Snow Excavator Crane Simulator...
သင်ဆင်း။ ပြီးပြည့်စုံစွာဆင်းသက်ပြီးလေဆိပ်သို့အချိန်မီရောက်ရန်သေချာပါစေ။ Flight Simulator 3D...
မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကားများနှင့်ယာဉ်အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သော Offroad Bus Mountain Simulator...
ကြောက်စရာအိမ်နီးချင်း 3D သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းအိမ်ထဲသို့ ၀...
မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် simulation ဂိမ်းများထဲမှ Virtual Truck Manager...
Cybershock: TD Idle & Merge သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များတွင် Android operating system...
Euro Bus Simulator 2018 သည်ကစားသမားများအားလက်တွေ့ကျကျ simulation အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ ...
Baby Full House ဂိမ်းသည်သင်၏ကစားခြင်းတွင် Android operating system...
Staff! သည် Android operating system...
Construction Simulator3Lite Edition တွင်သင်သည်ဆောက်လုပ်ရေး Simulator...